‘ महामारीको डटेर सामना गरिरहेका छौँ’ – Mission
‘ महामारीको डटेर सामना गरिरहेका छौँ’
बाँके जिल्लामा कोरोनाबाट सबै भन्दा बढी प्रभावित स्थानीय तह हो, नेपालगन्ज उप– महागरपालिका । जिल्लाको सबै भन्दा बढी जनसंख्या, घना बस्ती र भारतको सीमासँग जोडिएको नेपालगन्ज पहिलो तथा दोस्रो चरणमा कोरोना संक्रमणको ‘हटस्पट’ नै बन्यो । यहाँ पहिलोपटक गत वर्षको बैशाख १९ गते एक ६० वर्षीय बृद्धमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । उनी भारतबाट नेपालगन्ज आइपुगेका थिए । पहिलो चरणमा देश कै कोरोनाको रेडजोनका रुपमा रहयो भने त्यो भन्दा प्रभावित दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमणमा बढी प्रभावित भयो नेपालगन्ज । यतिसम्मकी एकै घरका तीन जनाको मृत्यु, प्रतिघर कोरोना संक्रमित,अस्पतालमा अक्सिजनको अभावदेखि स्वास्थ्यकर्मीहरुको चरम कमी भोग्नु पर्ने अवस्था आयो । त्यो भन्दा पनि यहाँ जिल्लाको सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भयो । कोेरोनाका कारण अहिलेसम्म नेपालगन्जका सयौँ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । अहिले पनि नेपालगन्ज कोरोना संक्रमणसँग जुँधिरहेको छ । दोस्रो चरणमा नयाँ भेरियन्ट सहितको कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि नेपालगन्जले अहिले के के काम गरिरहेको छ । त्यसको रोकथामका लागि स्थानीयस्तरबाट भइरहेको प्रयास, जनताले भोग्नु परिरहेका चूनौती, र कोरोना संक्रमणको अवस्थाका विषयमा नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख राम बहादुर चन्दसँग मिसन टुडे दैनिकका शुभाकर विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
१. नेपालगन्जमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि के कस्ता प्रयास भइरहेका छन् ?
दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमणका कारण नेपालगन्ज अनपेक्षित रुपमा प्रभावित भइरहेको छ । अहिले पनि यहाँ तीव्र रुपमा संक्रमण बढिरहेको अवस्था छ । त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि हामीले सबै भन्दा पहिला कन्ट्याक्ट टे«सिङलाई तिव्रता दियौँ । कूनै पनि व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुन वित्तिकै उनको नजिकको सम्पर्कमा रहेको मान्छे । त्यो व्यक्तिको यात्रा विवरण संकलन गरेर पीसीआर परिक्षण हुने गरेको छ । यस्तै हामीले हाम्रो पालिकामा एन्टिजेन परिक्षण समेत गरिरहेका छौँ । यो टेस्टबाट कोरोना भए नभएको तत्कालै थाहा हुन्छ । कडा खालको कोरोना देखिएमा पीसीआरको रिपोर्ट ढिलो आउने भएकोले यसलाई प्रमुखता दिएर कोरोना टेष्ट गरिएको हो । यहाँका सबै पालिकाले एन्टिजेन टेष्ट नै गरिरहेका छन् । दैनिक सय जना भन्दा बढीको कोरोना टेष्ट हुनेको गरेको नेपालगन्जमा । त्यसमा ७० देखि ८० जनाको हाराहारीमा पोजेटिभ देखिन्छ । पछिल्लो समय नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार होम आइसोलेसनको समेत व्यवस्था स्थानीय सरकारले गरेको छ । नेपालगन्जमा अहिलेसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या २ हजारको हाराहारीमा रहेको छ । यी मध्ये धेरै जना होम आइसोलेसनमा बसिरहेको अवस्था छ । नेपालगन्जमा रहेको २३ वटै वडामा होम आइसोलेसन रहेको छ । सबै वडामा फोकल पर्सन छन् । उनीहरुले नै होम आइसोलेसनमा रहेका कोरोना संक्रमितको अवस्था बुझ्नुका साथै हेरचाह र उपचारको लागि व्यवस्था मिलाउने काम गर्छन् । यस्तै स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गर्ने काम पनि उनीहरु कै हो । हाम्रोमा कोरोना संक्रमित धेरै भएपछि होम आइसोलेसनमा बस्नेहरुको संख्यामा पनि बढेको हो । पछिल्लो चरणको कोरोना संक्रमितमा कोरोना नै चिन्ह र लक्षणहरु देखा परेको छ । पहिलेको त्यस्तो थिएन । कतिपयको त घर मै बस्ने अवस्था हुँदैन । त्यस्ता केसहरुलाई अस्पतालमा लिएर उपचार गराउनु पर्ने हुन्छ । अहिले भेरी र मेडिकल कलेजमा हो धेरै कोरोना संक्रमितको उपचार हुने तर त्यहाँ पनि कोरोना संक्रमित भरिभराउ हुन्छन् । नेपालगन्जले ह्वाइट हाउसमा ५० बेड बराबरको आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरेको छ । पछिल्लो समय धेरै जसो बिरामाीमा अक्सिजनको मात्रा कम हुने समस्या देखिएको छ । भेरी र मेडिकल कलेजमा समेत बिरामीले बेड नपाउने समस्या आएपनि नारी विकास तालिम केन्द्रमा २० बेडको अक्सिजन सहितको सुविधाजनक आइसोलेसन समेत तयार पारिएको छ । यहाँबाट अहिलेसम्म १ सय २१ जनाले सेवा लिइसकेका छन् । पछिल्लो समय केही कम भएको छ । अक्सिजन दिनुपर्ने बिरामीलाई भेरी अस्पतालमा उपचार हुने गरेको छ । त्यसरीलै उपमहानगरपालिकाले अस्पतालसँग समन्वय गरेको छ । हामीले प्रत्येक वडामा आइसोलेसन निर्माण गरिएको छ । कतिपय वडाले डाक्टरको सुविधा सहित घरघरमा गएर सेवा दिइरहेका छन् । उपमहानगरले प्रत्येक वडालाई कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि भनेर १० लाखका दरले रकम विनियोजन गरेको छ ।
२. पहिलो र दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमणको अवस्थामा नेपालगन्ज यतिधेरै प्रभावित हुनुको कारण के हो ?
पहिलो चरणको कोरोना संक्रमणको बेला पनि नेपालगन्ज निकै प्रभावित भयो । त्यतिबेलाको कोरोना हटस्पट नै बनेको थियो । त्यतिबेला हामीले पनि निकै ठूला समस्या भोग्नु पर्ने बाध्यता भयो । त्यति बेला पनि जिल्लामा सबै भन्दा बढी प्रभावित नेपालगन्ज भएको थियो । अहिले दोस्रो चरणमा पनि नेपालगन्ज कोरोनाबाट प्रभावित भइरहेको छ । यसरी हेर्दा नेपालगन्जमा कोरोना फैलिनुका केही कारण मैले देखेको छु । पहिलो कारण यहाँको धेरै जनसंख्या हो । यस्तो बस्ती घना छ । यस्तै भारतसँग सीमा जोडिएको जमुनाहा नाका छ । कोरोना संक्रमणको प्रमुख कारण यहीँ हो । भारतबाट देशको पूर्वी क्षेत्रसम्म यहीँ नाका भएर मानिस आउने जाने गर्दछन् । भारतमा कोरोनाको कहर तीव्र रुपमा बढेपछि नेपालीहरु यहीँ नाका भएर आउन थाले । नेपालमा झैँ नेपालगन्जमा पनि भारतबाट कोरोना संक्रमण भित्रिएको हो । गत वर्षपनि सुरु मै हेल्प डेस्क स्थापना गरेका थियौ । त्यहाँबाट नेपाल आउनेहरुको स्वास्थ्य जाँच देखि पीसीआर टेष्ट समेत हुने गरेको थियो । एन्टिेजेन टेस्ट समेत गरेको हो । एकैदिन ५ देखि ६ हजार सम्म मानिसहरु आउथे । हामीसँग जनशक्ति नै थिएन । सबैलाई टेष्ट गर्न सम्भव भएन । तर जसलाई चेक गरियो उनीहरुको भने नगरपालिका र सरोकारवालाहरुको सहयोगमा राम्रो उपचार व्यवस्था गरिएको थियो । पछिल्लो समय थप १३ जनशक्तिको परिचालन गरियो । त्यसले केही सहजता पनि ल्यायो । सिमामा चेक गरिएका मात्रै २ सय जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ अहिलेसम्म । ती संक्रमित नेपालगन्जका भए होम आइसोलेसन र बाहिरी जिल्लाका संक्रमित ह्वाइट हाउसमा बस्छन् । अन्य जिल्लामा बस मार्फत सीमा क्षेत्रसम्म लैजाने गरिएको छ । नेपालगन्ज उच्च जोखिममा छ । अर्को कुरा यहाँ धेरै कार्यालय रहेका कारण पनि हो ।
३. समग्रमा पहिलो र दोस्रो चरण गरी यहाँ संक्रमित, सक्रिय संक्रमित र मृतक कति रहेका छन् नी ?
पहिलेको भन्दा अहिलेको धेरे देखिएको छ । नेपालगन्जमा पहिलो चरणको कोरोना संक्रमणको समयमा करिब ४० जनाको हाराहारीमा मात्रै भएको थियो । अहिले साढे एक महिनाको अवधीमा त्यो भन्दा दोब्बर मृत्युदर बढ्यो । अहिले हामीसँग ७६ जनाको डाटा रहेको छ । उनीहरुको सम्पूर्ण विवरण हामीसँग सुरक्षित छ । तर जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको तथ्यांक हेर्दा झण्डै साढे एक सय भन्दा बढी रहेको छ । यसमा नेपालगन्ज ठेगाना टिपाएका कर्मचारी र बाहिरका व्यक्तिहरु रहेका छन् । हामीले भने वडागत रुपमा नै छुट्याएका छौँ । पहिला ठेगाना जे लेख्छन् । केन्द्रले त्यही तथ्यांक राख्छ । तर हामीले त्यहाँको सम्पूर्ण विवरण मागेका छौँ । यसमा हामीले केही दिनमा समस्या समाधान गछौँ । अझै पनि यहाँ मृत्युदर बढ्ने सम्भावना रहेको छ ।
४. हटस्पटका फ्रन्टलाइनरहरुलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्नको लागि नेपालगन्जे के कस्ता सुविधा दिएको छ ?
पक्कै पनि कोरोनाको महामारीको समयमा सबै भन्दा अग्र स्थानमा स्वास्थ्यकर्मीहरु नै रहेका छन् । उनीहरुले नै जोखिम मोलेर अहिलेसम्म महामारीको सामना गरिरहेका न् । त्यसो भएकोले हुनाले हामीले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई चाहिने सामग्रीको कुनै पनि कुराको कमि हुन दिएका छैनौँ । उनीहरुलाई चाहिने, पीपीई, मास्क र सेनिटाइजर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिएको अवस्था छ । आइसोलेसन लगायतका केन्द्रहरुमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी उच्च प्राथमिकतामा रहेका छन् । उनीहरुको सुविधामा कुनै पनि कमी हुन दिएका छैनौँ । नेपालगन्जले अहिले पनि फ्रन्टलाइनरहरुलाई ८० प्रशितसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराएको अवस्था छ । पछिल्लो समय होम आइसोलेसनमा धेरै जना बसेको हुनाले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई यायायात र खाजा खर्चको लागि भनेर प्रति व्यक्त पाँच सय दरले सुविधा दिएको अवस्था छ ।
५. केहीदिनयता कोरोना संक्रमण र मृत्युदर घटेको समाचार आइरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा कोरोना महामारीको अवस्था कहिलेसम्म रहला, के देख्नुहुन्छ सम्भावना ?
यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो । विगत तीन चार दिनदेखि संक्रमण र मृत्युदर समेत बढ्दै आइरहेको छ । अहिले फेरी तेस्रो लहरको समेत कुरा आइरहेको छ । अहिले पनि हामीले ५० बेडको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरिरहेका छौँ । यति तेस्रो चरण आइहालेको खण्डमा हामीलाई व्यवस्थापनमा खास्सै चूनौती होला जस्तो मलाइ लाग्दैन । खास पछिल्लो समय सबैको प्रत्यक्ष निगरानीमा छौँ । हामीले सम्पर्क गर्न नसकेकाहरुलाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु । नगरपालिका अहिले पनि क्रियाशिल छ । अबको चार हप्तामा यस्तो अवस्था विस्तारै कमजोर हुँदै जाने देखिएको छ ।
६.अन्त्यमा, कोरोनाका महामारी अझै छ, यसबाट बच्नको लागि सम्पूर्णलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
यो विश्वव्यापी महामारीको समस्याका रुपमा रहेको छ । कोरोना अझै पनि फैलिरहेको अवस्था छ । नेपालगन्जमा पनि अझै कोरोना फैलिरहेकै अवस्था छ । अहिले सिंगो देश कोरोना नियन्त्रणको लागि जुटेको छ । त्यसैले हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पहल गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा अवश्य पनि कोरोना नियन्त्रण हुन्छ । तपाईंले आफूले पुरा गर्नुपर्ने दायित्व मात्रै पुरा गरिदिनुहोस् । समाजमा अगुवा, राजनीतिककर्मी, समाजेवी, सर्वसाधारण सबै लाग्नुपर्छ । सबैलाई निषेधाज्ञाको पालना गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु ।
प्रकाशित मितिः बुधबार, जेष्ठ १२, २०७८ 6:12:29 AM |
Posted in Flash news, अन्तर्वार्ता, समसामयिक, समाचार
Prevबालबालिकाका लागि अभिनेता रमित ढुंगानाले गरे सहयोग
Nextमिसन टुडे राष्ट्रिय दैनिक २०७८-२-१२